Iindaba ze-Phu Ly Bao Co., Ltd.
I-15 yeengcebiso zokupakisha ezingcono kakhulu.
Uyicwangcisa njani into yokupakisha kwakho:
1. Yenza uluhlu lokupakisha
Ipaspoti? Jonga. Ibhrashi yamazinyo? Jonga. Isikrini selanga? Doh! Uxolo lwengqondo unazo izinto ezibalulekileyo ezigutyungelweyo…
Indlela yokupakisha iimpahla:
2. Kunqande amabala
Wakhe wapakisha iimpahla ezikhanyayo kwaye wafumanisa ibala xa ufika? Ungaze uphinde ube nale ngxaki. Okokuqala kufuneka uhlale uqinisekisa iimpahla zakho ezikhanyayo zipakishwe ngaphakathi ngaphandle, kwaye okwesibini, bambelela ehotele imigqomo yeshawari elahlwayo kwaye uyisebenzise ukugubungela isiseko sezihlangu zakho.
3. Uluhlu kunye nepakethe yokupaka
Musa ukufika kwindawo oya kuyo ngeholide kwaye ujongane nemfumba yoku-ayina. Ukugcina indawo kunye nokuyeka ukwenziwa, qengqa iimpahla zakho endaweni yokuzisonga, emva koko uzifake kwiingxowa zokucinezela ezincamathelayo. Ukuze usebenzise ezi bhegi, beka iimpahla zakho ngaphakathi, uyitywine ibhegi, emva koko ucofe umoya. Oku kuyakushiya unendawo eninzi kwisutikheyisi yakho kwaye kuya kuthintela ii-creases.
4. Cube iimpahla zakho
Esinye isisombululo esihle sokupakisha kukupakisha iityhubhu - ezi zinceda ukwahlula izinto zakho kwaye ufumane izinto ngokukhawuleza wakufika apho.
5. Gcwalisa indawo efileyo
Xa kuziwa ekupakisheni, sebenzisa zonke ii-intshi ezincinci zesutikheyisi onakho. I-roll top, iimpahla zangaphantsi, iikawusi, kunye nezinye izinto ezincinci kwaye uzifake kwizihlangu zakho ukuqinisekisa ukuba yonke indawo enokwenzeka igcwalisiwe.
6. Hlala uhlaziyekile
Kubalulekile ukuba iimpahla zakho zinuke kamnandi, ngakumbi kuhambo olude. Ngokuthatha ibhegi encinci ye-potpourri, i-fabric conditioner sheets, okanye i-liner edibeneyo, uya kugcina iimpahla zakho zivumba kamnandi kulo lonke uhambo.
Indlela yokupakisha izixhobo:
7. Iingxowa zeZiplock
Uhlala uzicwangcisa njani zonke izinto ze-elektroniki, iintambo, ezo zinto zinokuthabatha iminyaka ukuze nizikhusele? Zibambe njengathi sonke? Ewe, ukuba ufuna ukuququzelela ukupakisha kwakho emva koko uzifumanele istash seebhegi zeziplock. Itshaja yefowuni, itshaja yekhamera, iiadaptha, ii-headphone- thatha iiplastikhi ezongezelelekileyo (ezifanayo onokuzisebenzisa kulwelo lwemithwalo) kwaye uzisebenzise ukugcina izinto zombane, izinto zohambo oluya ekhaya (izitshixo zendlu, itikiti lokupaka kunye nezitshixo zemoto ), amayeza kunye nezinye izixhobo ezikhululekileyo. Kwaye ukuba uyayithanda igajethi, kuya kufuneka ujonge izixhobo zethu zokuhamba eziphezulu.
Indlela ukupakisha make-up:
8. Uboya bomqhaphu
Ukuthintela umgubo ocoliweyo okanye isithunzi samehlo ekuqhekekeni ngexesha lokuhamba kwakho, beka iphedi yomqhaphu ecaba phakathi komgubo ocofisiweyo kunye nesiciko.
Indlela yokupakisha iincwadi:
Nokuba yeyileveli yothando inomphunga, i-sci-fi evuyisayo, okanye isikhokelo sokuhamba ngenja, sikhuphele ngaphambi kohambo lwakho. Nokuba ekhaya uluhlobo lwephepha-loku-ndiza-kufa, gcina indawo kunye nobunzima beholide yakho. Kwaye musa ukuthembela kwi-wi-fi yokutsiba ubuyele ebalini ukusuka kwisitulo sakho esime ngokugqibeleleyo. Qiniseka ukuba ikwisixhobo esogqunywe ngamanzi (jonga i-Otterbox malunga nokhuselo olunzulu kumfundi we-e-reader oyithandayo, ifowuni okanye ithebhulethi).
Ungazigcina njani izinto ezikhuselekileyo zikhuselekile:
10. Iibhotile ezingenanto kunye neetyhubhu
Ukuthintela eyona meko imbi kakhulu yokukhuthuzwa, kungcono ungabonakali: sukukhanyisa imali okanye ubucwebe obubizayo. Ukuba unenkxalabo ngezinto ezixabisekileyo kwigumbi lakho lehotele, zifihle kwisitya esingenanto selon lotion. Unokusebenzisa izikhongozeli zomlomo webhals ezingenanto ukufihla amanqaku asongwayo.
Ungayiphepha njani imirhumo eyongezelelweyo yemithwalo:
11. Nika ubunzima umthwalo wakho
Gcina imali kwizikali zemithwalo kwaye uqiniseke ukuba ulinganisa iibhegi zakho kwimilenze yomibini yohambo ukuze ubone ukuba ukufutshane kangakanani ukufikelela kumda wobunzima. Ukuba ukufutshane nomda, cinga ngokunxiba ezinye zezinto ezinobunzima okanye ukunciphisa izinto ozipakishayo kwasekuqaleni.
12. Thenga isutkheyisi elula
Ungacingi ukuba ukuthenga eyona sutikheyisi ibiza kakhulu kukufumanela ukuphuculwa- endaweni yoko, kunokwenzeka ngakumbi ukutsala amasela kwisikhululo seenqwelomoya kunye nakohambo lwakho. Kungcono ungabonakali kwaye uye kukhetho olunobunzima. Ukuba usebenzisa isutikheyisi ye-hardshell, oku kungongeza ukuya kuthi ga kwisisindo sobunzima ngaphambi kokuba uqalise ukupakisha, ukubiza kakhulu akusoloko kulunge.
13. Yazi imida yakho
Isibonelelo semithwalo siyahluka ukusuka kwinqwelomoya nakwinqwelomoya. Qiniseka ukuba uyazi imida yakho ngaphambi kokuba ufike kwisikhululo seenqwelomoya. Ezinye, kodwa ayizizo zonke izinto zokuthwala eziza kukuvumela ukuba ujonge kwiingxowa ezimbini, kwaye isibonelelo sobunzima siyahluka (jonga inqaku le-12). Qiniseka ukuba uyasiqonda isibonelelo semithwalo yezandla kwaye uphephe ukubiza iindleko esangweni. Unokufuna kwakhona ukufunda isikhokelo semithwalo yesandla.
Ungalahli umthwalo wakho njani:
Sukujongana nengxaki yemithwalo yeenqwelo moya xa ujonga umthwalo wakho phakathi kwabamelwane bawo abafanayo. Bhala i-suitcase yakho kunye neethegi zemithwalo kwaye uyinike into encinci yokwenza ukunceda ukuyibona kwisihlwele. Yihombise ngeeribhoni, izitikha okanye imitya yezihlangu enemibala ukuze ibonakale kwangoko.
Uhlangabezana njani nemithwalo elahlekileyo:
15. Pakisha umthwalo olungileyo wesandla
Nokuba sihombise kakuhle kangakanani ityesi yethu, ngamanye amaxesha into engacingekiyo yenzekile. Ngamanye amaxesha iingxowa ziyalahleka. Qiniseka ukuba zonke izinto zakho zexabiso zisesikhwameni sakho kwaye uhlala upakisha utshintsho lokutshintsha lwempahla nakwimpahla yakho, nokuba kwenzeka okona kubi kwaye ibhegi yakho ekhangelwe ilahlekile / ilibazisekile. Ngale ndlela awuzukukhawuleza uye ezivenkileni nje ukuba ufike uyokuthenga iimpahla ezinokutshintsha. Kodwa ngaphambi kokuba uye utyhale yonke into esesandleni sakho, ungamangaliswa zezinye zezinto ezingaqhelekanga ezingavumelekanga kwingxowa yakho yeekhabhathi.